कुनै बालिका मित्र हीरे भन्दा राम्रो हो कि प्रसिद्ध भन्दै Merilin Monro सम्झना? र तिनीहरूले लागि पैसा छ भने छैन, तर म, चमक गर्न चाहन्छु, regally सुन्दर उज्यालो, अद्वितीय देखिन्थ्यो? खैर, यो तपाईं fianites को विस्तृत सजावट धारण भने, पनि विशेषज्ञहरु तुरुन्तै नक्कली पहिचान किनभने भएन र भने रानी अगाडि तपाईं टाउको अघि reverently गर्छन, remedied।
को के हो घन zirconia पत्थर, यसको गुण के के रोचक छन्? धेरै, धेरै। सबै को पहिलो, यसको मूल। यो शानदार मात्र कृत्रिम हुर्किसकेका (homunculus रूपमा) कृत्रिम छ। उहाँले आफ्नो प्रोटोटाइप जस्तै ठूलो छ। लगभग समान को को अपवर्तनी सूचकांक प्रकाश रेज गर्दा कट, प्रतिभा र दल को चमक। मात्र हीरा प्ले झिल्काहरु छ र झन्झन् बस क्यूबिक zirconia चमकता। विभिन्न खनिज को रंग विशेषताहरु। देखाउँदै रासायनिक संरचना र आवधिक तालिका केही तत्व को अशुद्धताओं आधारमा पनि fianit पत्थर गुण हीरे, तर पनि अन्य बहुमूल्य क्रिस्टल गर्न मात्र होइन बन्द गर्नुहोस्। के यो एक धनी रातो बनाउन भने, तपाईं माणिक को राम्रो अनुकरण प्राप्त। पहेंलो वा सुन्तले रंग थप्न - र तपाईंले अनुरूप रंग हीरे छ। Pinkish र थोडा बैंगनी रंग रूपान्तरणहरूलाई, क्रमशः, नीलम क्यूबिक zirconia र गामा नीलो र गाढा निलो रंग मा पूर्ण यसलाई topazes र नीलमणि मा रूपान्तरणहरूलाई। त्यो यस्तो अचम्मको छ पत्थर क्यूबिक zirconia, सबैभन्दा महंगा सजिलो संग बहुमूल्य खनिज नकल को बहुमत को गुण। त्यसैले, सबै भन्दा यसको प्रयोग व्यापक एक आभूषण व्यवसायसँग सम्बन्धित छ। यदि तिनीहरूले प्राकृतिक क्रिस्टल क्यूबिक zirconia द्वारा फ्रेम छन् छल्ले, कान को बाली, हार र अन्य आभूषण, extraordinarily सुन्दर शानदार सुरुचिपूर्ण, स्टाइलिश हेर्न। पत्थर को प्रत्येक प्रकार प्रत्येक अन्य फाइदाहरूको जोड दिन्छ। उद्योग, कुल उत्पादन मात्रा "homunculus" को 2% को प्रयोग। र हामी आविष्कार र सोभियत संघ, विज्ञान को एकेडेमी को भौतिकशास्त्र संस्थान को युग मा (गुण "प्रोग्राम" लगभग 43 वर्ष पहिले) एक घन zirconia पत्थर सिर्जना गरियो। र पत्थर को नाम - अन्य छैन, संस्था नै नाम को एक संक्षिप्त रूपमा।
astromineralogii र दैनिक जीवनमा Fianit
कृत्रिम खनिज द्वारा ज्योतिष र जादुगर अस्पष्ट छन्। यो ऊर्जा पूरा शक्ति मात्र प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक पत्थर हुन् भनेर स्पष्ट छ। तिनीहरूले आमा-पृथ्वी, ब्रह्माण्ड, को ग्रह सम्बन्धित र विशेष व्यवस्था गरेर तिनीहरूलाई अन्तरक्रिया छन्।
Fianit (पत्थर) मात्र यो हुर्किसकेका क्रिस्टल दिइएको छ जसमा क्षेत्रमा आफ्नो प्रदर्शन को गुण। जादू मा, यो सूक्ष्म संसारको ऊर्जा ध्यान गर्न मद्दत गर्छ, र कला मा कुशल ती भनेर। astromineralogii अनुसार, कृत्रिम हीरे तिनीहरूलाई मालिक जो को पत्थर दास छन्। पातलो संसारमा कंडक्टर। दृश्य एक नैतिक बिन्दुबाट - तिनीहरूले मानव इच्छा, साइन को कार्य संग, कदम बाध्य बृद्धि ""। कारण संतुलन को व्यवस्था गर्न, अर्थमा आफ्नो कार्यान्वयन को पत्थर क्यूबिक zirconia मूल्य कि कालो जादूगर धेरै चाँडै नै सिक्का को दिनुहुन्छ। र esoteric संग व्यक्ति कुनै पनि तरिकामा जोडिएको छ भने उहाँले धेरै फरक फारममा क्यूबिक zirconia सामना गर्न सक्नुहुन्छ। सजावट रूपमा, तिनीहरूले ठूलो हो, तर talismans रूपमा, हाय, बेकारी। हुनत ... तपाईं एक चम्केको कंकड वा श्रृंखला मा एक चम्केको लटकन संग ringlet प्रशंसा गर्दै भने, तपाईं आनन्द, खुशी को एक वृद्धि महसुस, त्यसपछि fianit तपाईं एक सानो सुखी बनाउन। र यो एक धेरै मतलब! खैर, यो एक विदेशी यात्रा मा जानुहोस् र लामो दूरी हटाउन छोटो समय छ भने एक राम्रो विचार, एक क्रिस्टल पूरा गर्न भनेर कल्पित छ। यस मामला मा घन zirconia तपाईं शुभकामना छ, रोचक परिचितहरू, सुखद साहसिक र सजिलो सडक दिनेछु।
Assol: नाम मान, मूल, प्रकृति र भाग्य मालिक
रंग को प्रतीकात्मक रूप: रातो
विगतमा फर्कन कसरी धेरै तरिकाहरू
Alisher कुनै पनि छ नाम को मूल्य? यसको मूल र मानव प्रकृति
Rostov Hippodrome ठेगाना, समीक्षा, फोटो
गर्भावस्था र काम। आधारभूत नियमहरू, nuances र पङ्क्तिबद्ध अवस्था
सिलोन एक भिसा चाहिन्छ? श्रीलंका सरलीकृत प्रक्रिया
Joan महल होटल4(ग्रीस, क्रेते): समीक्षा, मूल्यहरू र फोटो
घटनाहरू स्पोर्ट: नाम, आदर्श वाक्य, आयोजना र सञ्चालन
Sapsan बहुमुखी मिसाइल प्रणाली को परियोजना
Lasolvan inhalation: गृह प्रयोगको लागि निर्देश
म्याट्रिक्स त्रयी: मोरपैस। साजिशको विकासमा चरित्र र भूमिकाको जीवनी
Mozart सुनेर तिमी पागल ड्राइव गर्न सक्छन् गर्छ?